Tag: marketing salon
Tsiambaratelon'ny raharaham-barotra amin'ny salon: Hevitra marketing 10 azo ampiharina izay afaka manampy anao hiantoka mpanjifa bebe kokoa
Alakamisy 14 martsa 2019 Zoma, Martsa 15, 2019 Suzy Viola
Ny Salons dia mampiasa vola be amin'ny toerana misy azy ireo, ny mpiasa sy ny manampahaizana manokana aminy, ny fitaovany ary ny vokatra vokariny. Na izany aza, zavatra iray tsy raharahian'izy ireo matetika ny fampiasam-bola. Ahoana no ahitan'ny mpanjifa ny salon mahafinaritra anao raha tsy izany? Na dia mety ho zavatra sarotra fifehezana aza ny marketing, dia mbola azo tanterahina ihany, ary tsy mila atahorana. Betsaka ny hevitra marketing nozahana sy notsapaina ho an'ny salon izay miasa tsara amin'ny fisintomana